fighting - Synonyms of fighting | Antonyms of fighting | Definition of fighting | Example of fighting | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for fighting
Top 30 analogous words or synonyms for fighting
ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှုသမိုင်း တပ်မတော်ဟာ ကမ္ဘာရဲ့ စစ်သေနင်္ဂဗျူဟာ (World's Military Science)မှာ ပြောက်ကျားတိုက်ရည် (Burmese Techinique Of Guerilla Fighting)
အက်ဖ်-၁၆ Lockheed Martin ၏ F - 16 ( Fighting Falcon) သည် ဘက်စုံသုံး တိုက်လေယာဉ် ဖြစ်ပြီး အမေရိကန် လေတပ်အတွက် ထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ စတင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲစဉ်က အပေါ့စား တိုက်လေယာဉ်အဖြစ် ဒီဇိုင်း ရေးဆွဲခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် အောင်မြင်သော ဘက်စုံသုံး တိုက်လေယာဉ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ငါး (တိရစ္ဆာန်) carp၊ ကော့ဒငါး (cod)၊ ဟဲရင်းငါး (herring)၊ perch၊ ငါးသေတ္တာငါး (sardines)၊ sturgeon၊ တီလားပီးယား (tilapia)၊ trout၊ tuna နှင့် အခြားငါးအမျိုးမျိုးတို့ဖြစ်ကြသည်။ အချို့သောသူတို့သည် ငါးကို အလှမွေးတိရိစ္ဆာန်အဖြစ်မွေးကြသည်။ အလှမွေးငါးများတွင် ရွှေငါး(Goldfish) နှင့် တိုက်ငါး(Siamese Fighting Fish) တို့မှာ ထင်ရှားသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် လူတို့က ငါးများကို အများသုံးကန်များတွင် အလှ နှင့် စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစရာ အဖြစ် မွေးမြူကြသည်။
မြင့်ကြွယ်၊ မြို့မ ကရာတေးအသင်းများကို ကျွန်းတောလမ်း စမ်းချောင်းမြို့နယ် တွင်လည်းကောင်း၊ ၃၅၃၊ မြို့မကျောင်းလမ်း အ.ထ.က(၂)ဒဂုံ မြို့ မကျောင်း ဒဂုံမြို့နယ် တွင်လည်းကောင်း၊ ခြံအမှတ်-၇၄ စီ အင်လျားလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် ၏ နောက်ဘက်ရှိ အင်းလျားလမ်း ကမာရွတ်မြို့နယ်(ဦးဘဘကြီး) ခြံတွင်လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ပြည်လမ်း လိပ်ခုံးခန်းမ ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင်လည်းကောင်း၊ ခြံအမှတ်-၁၀၅ ဟယ်လပင်လမ်း (ယခု ပြည်ထောင်စုရိပ်သာလမ်း) ဒဂုံမြို့နယ် တွင်လည်းကောင်း၊ ခြံအမှတ်-၃၀ F အင်လျားလမ်း ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင်လည်းကောင်း၊ ဘန်ကောက်မြို့တွင်လည်းကောင်း ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့သည်။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ လူငယ်များအား ဆိုရှိကိ တိုက်ခိုက်ရေးပညာများသာမက ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်သက်ဆိုင်သော လူ့ကျင့်ဝတ်ပညာ စသည်တို့ကိုလည်း ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် စာတွေ့လက်တွေ့ ပူးတွဲပို့ချပေးခဲ့သည်။ ငွေကြေးချို့တဲ့သူများဆိုပါက အခမဲ့ ကရာတေးသင်ပေးခဲ့သည်။ One-on-one combat training, Two-on-one combat training, Three-on-one combat training, Hand-to-hand combat training, Ground fighting techniques (Street fighting techniques), Intensive combat training, Special bodyguard training, Personal security officer training များ ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် ဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့သည်။
ဘီ-၂၉ ဗုံးကြဲလေယာဉ် Saipan was invaded by US forces on 15 June 1944, and despiteaJapanese naval counterattack which led to the Battle of the Philippine Sea and heavy fighting on land, was secured by9July. Operations followed against Guam and Tinian, with all three islands secured by August.
၂၀၁၅ ကိုးကန့်စစ်ပွဲ Allied group of Ta-ang National Liberation Army (TNLA), Arakan Army (AA) are also fighting alongside the MNDAA. Some sources indicated that the Kachin Independence Army (KIA), United Wa State Army and National Democratic Alliance Army were also involved, but KIA denied its involvement.
ကိုယ် နှုတ် စိတ် ယဉ်ကျေးခြင်း ၁. သူတစ်ပါးနှင့် မိမိမိတ်ဆွေတို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွင်းရေးကိစ္စများ၊ အားနည်းချက်များ၊ မိမိမိသားစု၏အတွင်းရေးကိစ္စများ၊ အားနည်းချက်များကို အခြားသူများအား မပြောရ။ သူတစ်ပါး၏မိသားစု အတွင်းရေးအားနည်းချက်များကို အသေးစိတ်မသိချင်ရ။ မိသားစုဝင်အချင်းချင်း အားနည်းချက်များ၊ မကျေနပ်ချက်များရှိပါက ကိုယ့်အချင်းချင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်အဖြေရှာသင့်သည်။ ဖြစ်သင့်သည်မှာ မိသားစုဝင်တစ်ချို့၏ အားနည်းချက်များကို မိသားစုဝင်ချင်းအချင်းချင်းသာ ယဉ်ကျေးစွာ၊ စိတ်ရှည်စွာဖြင့် မိသားစုစိတ်ဓာတ် (family spirit) ပြေလည်သည်အထိ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးအဖြေရှာသင့်ပါသည်။ (Compromise is better than fighting) (Negotiation is better than confrontation) (Patience is better than confrontation) (Forgiveness is better than confrontation)